Tag: Arday | Sagal Radio Services
Arday baratay maaddada caafimaadka oo shahaddooyin lagu guddoonsiiyay Laascaanood
Munaasibad shahaadooyin lagu gudoonsiinayey in ka badan 260 arday oo bartay maadooyinka Caafimaadka iyo computerka ayaa lagu qabtay xarunta Bisha Cas ee magaaladda Laascaanood Xarunta gobolka Sool.
Arday baratay xirfadda farsamada gacanta oo shahaaddooyin Boorama lagu guddoonsiiyay
Sagal Radio Services • News Report • February 5, 2013
Arday baratay xirfadaha gacanta, oo tiro ahaanna gaaraya boqol, ayaa shahaaddooyin maanta lagu guddoonsiiyay gudaha magaalada Boorama ee xarrunta gobolka Awdal.
222 arday oo ka qalan jibisay jaamacadda Plasma University ee Muqdisho
Sagal Radio Services • Audio/Commentary/News Report • December 29, 2012
Magaalada Muqdisho waxa lagu qabtay shalay (Jimco) xaflad si heersare loo soo agaasimay, oo ay ku qalan jibiyeen arday gaaraysa 222, kuwaas oo ka baxay kulliyadaha kala gaddisan ee jaamacadda Plasma University ee Muqdisho.
Ku dhawaad 200 oo arday oo ka qalin jabisay jaamacadda Soomaaliya
Sagal Radio Services • Audio/News Report • September 5, 2012
Ku dhawaad 200 oo arday, ayaa Isniintii ka qalan jabisay Jaamacadda Soomaaliya (University of Somalia) ee magaalada Muqdisho, iyadoo ardada qalan jabisayna ay muujiyeen dareenkooda farxadeed.
Wareysiga Maxamed oo ka mid ahaa ardadii qalin jabisay